Xayeysiinta | Wararka Gadget
Hadda War gadget, oo ka tirsan Shabakadaha baloogyada Blog, ayaa si joogto ah ugu sii kordheysa tirada booqashooyinkeeda, dhammaantoodna waxay ka socdaan dadka xiiseynaya macluumaadka ku saabsan aaladaha iyo qalabka elektarooniga ah. Kani waa nooca dhagaystayaasha aad rabto inaad ku gaadho xayeysiintaada.
Waxaad nala soo xiriiri kartaa adoo adeegsanaya foomka soo socda:
Waan aqbalay Siyaasadda habaynta xogta.
Markaad gudbineyso foom, xogta sida emaylkaaga iyo magacaaga ayaa lagaa codsanayaa, kuwaas oo lagu keydiyay buskud si aanad uga maarmin inaad mar labaad ku buuxiso shixnadaha mustaqbalka. Adoo soo gudbinaya foom waa inaad aqbashaa siyaasadeena asturnaanta.
Ujeedada xogta: Ka jawaab codsiyada lagu helo foomka
Sharci: Oggolaanshahaaga cad
Xuquuqda: Helitaanka, hagaajinta, tirtirka, xaddidaadda, qaadista iyo hilmaaminta xogtaada